Nelson Simedo oo fariin qiiro leh ku macsalaameeyay kooxda Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 23 Sebt 2020. Ka tagista Nelson Simedo ee kooxda Barcelona ayaa noqotay mid la hubo, kaddib markii uu daafaca reer Portugal ku dhawaaqay arrintan, isagoo fariin macsalaameyn ah u diray kooxda reer Catalonia, saaxiibadiisa iyo taageerayaasha.
Wolverhampton ayaa heshiis la gaaray Barcelona si ay Nelson Simedo kaga saxiixato heshiis 5 xilli ciyaareed ah, waxayna kooxda reer Catalonia taasi badelkeeda heli doontaa qiimo dhan 35 million euros.
Kooxda reer Spain ayaa raacdo ugu jirto sida ay ku heli laheyd badelka Nelson Simedo, waxayna dooneysaa inay la saxiixato xiddiga kooxda Ajax ee Sergiño Dest.
Nelson Simedo ayaa boggiisa rasmiga ah ee “Instagram-ka” ku soo qoray fariin uu ku macsalaameynayay kooxda Barcelona, saaxiibadiisa iyo taageerayaasha, wuxuuna yiri:
“Aad ayaad ugu mahadsan tihiin Barcelona, fursada aad ii siiseen inaan ku noolaado riyada ah inaan xirto maaliyadan, inaan ku ciyaaro garoonka Camp Nou, isla markaana aan barto oo aan ku raaxeysto ciyaartoyda ugu fiican”.
“Waad ku mahadsan tahay inaad iga dhigtay ciyaartoy iyo shaqsi ahaanba, waxay ahayd seddex sano oo cajiib ah oo aanan ilaabi doonin, waxaan u mahadcelinayaa asxaabteyda, shaqaalaha iyo dhamaan dadka i soo caawiyey tan iyo imaatinkayga”.
Nelson Simedo ayaa kaga soo biiray Barcelona kooxda Benfica sanadkii 2017, laakiin ma uusan u horumarin sidii la rajeynayey, maadaama uu mararka qaar ka soo muuqan jiray kursiga keydka, mararka qaarna uu soo bandhigayay qaab ciyaareed liita marka uu garoonka cagaha dhigo.